Iko Tea Cup, Tumbler Wine Cup, Glass Glass - Qiaoqi
Craft kalama mmanya kalama
N'ogbe Cheap Large Restaurant Water Arinụ ...
n'aka igbu iko onyinye ahaziri logo Magnetik h ...
2019 ọhụrụ mbata Dragon udi iko mmanya karama
Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Glass Hand Ntapu pyrex personaliz ...
High borosilicate iko okpomọkụ na-eguzogide kọfị m ...
Akwa akwa okpukpu abụọ mgbidi iko tii iko kọfị iko
Omenala uzo uzo Travel Reusable Nọgidenụ ...
Creative Nkecha Desktọpụ Droplet Oké Ifufe Glass Ba ...
Modern Now Clear Omenala Logo Ugboro abụọ Wall Boro ...
Nabata na Qiaoqi
Shijiazhuang Qiaoqi Glass Product Co., Ltd. emi odude ke Shijiazhuang City, Hebei Province nke China.
Anyị bụ ndị a ọkachamara mbupụ ụlọ ọrụ nke nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na nwere a ọkachamara otu na-elekọta nke mbupụ azụmahịa.
Anyị nwere ike ịnakwere nye iwu na-emepụta dị ka gị imewe logo na agba igbe. N'otu oge ahụ, ịnwere ike ịnweta ọrụ ire ere na ahịa mgbe kacha mma. Tenkpụrụ anyị bụ 'Ọmarịcha mma & ọnụahịa dị mma & Ọrụ dị mma'.
192020 / Ọkt
Ihe na-enye mmanụ mmanụ - Ezi onye inyeaka na kichin
Kedu otu esi eme ka ndụ gị dị mfe? Anyị High Borosilicate iko mmanụ dispenser nwere ike inyere gị aka ịchịkwa agwọ ndụ. Ejiri aka mee karama a. High Borosilicate iko akụrụngwa. Nwere ike ikwu!
202020 / Ọgọst
1.Choose ihe: Akwa borosilicate iko tube ịhọrọ oke dị iche iche, ọkpụrụkpụ na dayameta dabere na ngwaahịa ndị achọrọ ịmepụta. Na e nwere agba nke uzo, amba, acha anụnụ anụnụ, odo, isi awọ, pink, nwa, ndị akacha eji ...
Kemgbe amụrụ ya, ndị mmadụ nwere ihu ọma nke ukwuu maka iko a na - eji borosilicate. Ọ bụ otu n'ime ihe dị mkpa maka ndụ ụlọ, na nghọta dị elu, nguzogide abrasion, elu dị mma, nhicha dị mfe, na ahụike. Ka osi di, otutu ajuju ka eji nwayo, “Enwere ike elu b ...